Nisy fipoahana roa namely ny tanànan’i Beirota – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Nisy fipoahana roa, ny faharoa lehibe kokoa noho ny voalohany, namely ny tanànan’i Beirota tamin’ny fiandohan’ny talata hariva, nahafatesana olona 154 farafahakeliny, nandratra olona maherin’ny 5.000 ary niteraka fahasimbana niparitaka be. Maherin’ny 1,000 ny olona naiditra hopitaly, ary 120 no mbola tra-doza tamin’ny zoma, hoy ny minisitry ny fahasalamana Liban, Hamad Hassan.
Ny fipoahana faharoa dia nandefa vongan-dranomavo mena midorehitra teo ambonin’ny seranan-tsambon’ny tanàna ary niteraka onjam-pahatafintohina izay namaky fitaratra nandritra ny kilaometatra maro. Na dia eo aza ny asa fikarohana goavana, am-polony no heverina fa mbola tsy hita ao an-tanàna, renivohitr’i Libanona, any amin’ny morontsiraka atsinanan’i Mediterane.
Rehefa manambatra ny zava-nitranga ny manam-pahefana, dia izao no jerena ny zavatra fantatray sy tsy fantatray.
Inona no nahatonga ny fipoahana?
Tsy fantatra mazava ny tena anton’izany, fa ny trano fitehirizam-bokatra iray no nirehitra tamin’ny 6 ora hariva. Nisy fipoahana roa, ny iray kely kokoa izay narahin’ny fipoahana lehibe kokoa izay nandrava faritra maro tao an-tanàna.
Tags: afoakiraall mightanimeapokalipsyArabia SaoditaarabobakugobakugouBeirotabeyrouthbnhaboku no hero academiaboomdekudubaiEjiptaEmiràfairouzfipoahanafitenyhabibiIrakizukujapanjordaniakacchankaligrafiakatsukikatsuki bakugoukonosubakuwaitLibanonamahafatifatymahery fomampihomehymangamarocmeguminměnamhamidoriyamoyen-orientMozikamy hero academianostalgiaqatarquotesretrosederasyriatanànatypographyuaevintagevono olona fipoahana
Next Par splużjonijiet laqtu l-belt ta’ Beirut
Previous ബെയ്റൂട്ട് നഗരത്തിൽ ഒരു ജോടി സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി